ကမ်း⁠ဇော်ပင်အေ⁠ကြာင်း သိ⁠ကောင်းစရာ - Myanmar Farmers' Portal
Home စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ ကမ်း⁠ဇော်ပင်အေ⁠ကြာင်း သိ⁠ကောင်းစရာ
ကမ်းဇော်ပင်(madhuca indica)ဟာ အပင်ကြီးမျိုးဖြစ်ပြီး မူလပေါက်ရောက်ရာဒေသ ကတော့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နဲ့ နီပေါ နိုင်ငံတွေမှာလည်း သဘာဝအတိုင်းပေါက်ရောက်နေတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။
အာယုဗေဒ ဆေးပညာမှာတော့ ကမ်းဇော်ပင်ပေါက်၊ကမ်းဇော်ပင်အခေါက်၊ကမ်းဇော်ပွင့် ကမ်းဇော်စေ့ ၊ကမ်းဇော်ဆီ တို့ကို ဆီးချိုရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊အမျိုးသား /အမျိုးသမီး အမြုံရောဂါ၊ရောင်ရမ်းနာများ၊လိပ်ခေါင်းရောဂါ၊အရေပြားရောဂါများ၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊မီးလောင်နာ၊ သံကောင်ရောဂါ၊ဖျားခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊နှင့် အနာကျက်မြန်စေရန်အသုံးပြု သလို အားဆေးအဖြစ်လည်း မှီဝဲနိုင်ပါသည်။
အဆီ-အရေပြားရောဂါ၊အဆစ်ရောင်လေးဘက်နာရောဂါ၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊လိပ်ခေါင်း၊သံချဆေး ၊ဝမ်းနှု တ်ဆေး အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။အသီး -ခွန်အားဖြစ်စေရန်၊ လေပြွန်ရောင်သက်သာရန်၊ အနာကျက်မြန်ရန်၊အာသီးရောင်သက်သာရန်၊အစာမျိုရောင်ရမ်းခြင်း သက်သာရန် အသုံးပြုနိုင် သည်။
အခေါက်-လေးဘက်နာ၊အနာကျက်မြန်ရန်၊ရောင်ရမ်းနာများ၊သွေးထွက်လွန်ခြင်း၊သွားဖုံးရောင်ခြင်း၊အာသီးရောင်ခြင်း၊ဆီးချိုရောဂါ၊အစာအိမ်နာခြင်း၊အရိုးကျိုးခြင်း၊ယားနာများနှင့် မြွေဆိပ်ဖြေေ ဆး အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
အပွင့်အရက်ချက်ခြင်း၊ဂျယ်လီထုတ်လုပ်ခြင်း။အချိုရည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး၊မိခင်နို့ရည်ထွက်ဆေး၊ဆီးဆေး၊သံချဆေး၊အသည်းအားဆေး၊အစားအိမ်ဆေး အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။
2-အစေး–soluble resin, insoluble resin.
4-အပွင့်–carotene,as conic acid, thiamine, riboflavin, niacin,folic acid,biotin,inositol.
5-ရင့်မှည့်သော အသီး-moisture,protein,fat,carbohydrate,minerals,calcium,phosphorus,iron,carotene,as obit acid,tennis.
6-အစေ့ဆီ-35%oil and 16%protein
သုတေသနပြုစစ်ဆေးချက်များ အရ ကမ်းဇော်ပင်ရဲ့ အခေါက်ဟာ ကင်ဆာ ကိုတိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းရှိတယ် ဆိုတာ ကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Credit – ဒေါက်တာမိုးမိုးခိုင်
ကမျးဇျောပငျ(madhuca indica)ဟာ အပငျကွီးမြိုးဖွဈပွီး မူလပေါကျရောကျရာဒသေ ကတော့ အိန်ဒိယ နိုငျငံဖွဈပါတယျ။ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံတှေ ဖွဈတဲ့ မွနျမာ၊ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နဲ့ နီပေါနိုငျငံတှမှောလညျး သဘာဝအတိုငျးပေါကျရောကျနတော ကိုတှရေ့ပါတယျ။
အာယုဗဒေ ဆေးပညာမှာတော့ ကမျးဇျောပငျပေါကျ၊ကမျးဇျောပငျအခေါကျ၊ကမျးဇျောပှငျ့ ကမျးဇျောစေ့ ၊ကမျးဇျောဆီ တို့ကို ဆီးခြိုရောဂါ၊ အသညျးရောဂါ၊အမြိုးသား /အမြိုးသမီး အမွုံရောဂါ၊ရောငျရမျးနာမြား၊လိပျခေါငျးရောဂါ၊အရပွေားရောဂါမြား၊ ဝမျးခြုပျခွငျး၊မီးလောငျနာ၊သံကောငျရောဂါ၊ဖြားခွငျး၊ခေါငျးကိုကျခွငျး၊နှငျ့ အနာကကျြမွနျစရေနျအသုံးပွု သလို အားဆေးအဖွဈလညျး မှီဝဲနိုငျပါသညျ။
အဆီ-အရပွေားရောဂါ၊အဆဈရောငျလေးဘကျနာရောဂါ၊ခေါငျးကိုကျခွငျး၊လိပျခေါငျး၊သံခဆြေး ၊ဝမျးနှု တျဆေး အဖွဈသုံးနိုငျသညျ။
အသီး -ခှနျအားဖွဈစရေနျ၊ လပွှေနျရောငျသကျသာရနျ၊အနာကကျြမွနျရနျ၊အာသီးရောငျသကျသာရနျ၊အစာမြိုရောငျရမျးခွငျး သကျသာရနျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
အခေါကျ-လေးဘကျနာ၊အနာကကျြမွနျရနျ၊ရောငျရမျးနာမြား၊သှေးထှကျလှနျခွငျး၊သှားဖုံးရောငျခွငျး၊အာသီးရောငျခွငျး၊ဆီးခြိုရောဂါ၊အစာအိမျနာခွငျး၊အရိုးကြိုးခွငျး၊ယားနာမြားနှငျ့ မွှဆေိပျဖွဆေေး အဖွဈ အသုံးပွုနိုငျသညျ။
အပှငျ့-အရကျခကျြခွငျး၊ဂယျြလီ ထုတျလုပျခွငျး။အခြိုရညျထုတျလုပျခွငျး၊ခြောငျးဆိုးပြောကျဆေး၊မိခငျနို့ရညျထှကျဆေး၊ဆီးဆေး၊သံခဆြေး၊အသညျးအားဆေး၊အစားအိမျဆေး အဖွဈ အသုံးပွုနိုငျသညျ။
2-အစေး–soluble resin, insoluble resin.
4-အပှငျ့–carotene,as conic acid, thiamine, riboflavin, niacin,folic acid,biotin,inositol.
5-ရငျ့မှညျ့သော အသီး-moisture,protein,fat,carbohydrate,minerals,calcium,phosphorus,iron,carotene,as obit acid,tennis.
6-အစဆေီ့-35%oil and 16%protein
သုတသေနပွုစဈဆေးခကျြမြား အရ ကမျးဇျောပငျရဲ့ အခေါကျဟာ ကငျဆာ ကိုတိုကျဖကျြနိုငျစှမျးရှိတယျ ဆိုတာ ကို သကျသပွေနိုငျခဲ့ပါတယျ။